काठमाण्डौ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ। संस्थाको जेठ १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले तेस्रो वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो। बैठकले आगामी जेठ २८ गते शनिबारका दिन बुटवल रुपेन्देहीमा सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त सभामा आ.व २०७७र७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी...
काठमाण्डौ । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । कम्पनीको वैशाख २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको चौथो वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो । बैठकले आगामी जेठ २५ गते बुधबारका दिन काठमाण्डौ ज्ञानेश्वरमा रहेको लिसरा ब्याङक्वेटमा बिहान ११ बजे सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सभामा...
गोर्खाज फाइनान्सले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ। कम्पनीको वैशाख २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २७ औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो। बैठकले आगामी जेठ २७ गते काठमाण्डौ बानेश्वरमा रहेको अनुपम फुडल्याण्ड एण्ड ब्यांक्वेटमा बिहान ११ः३० बजे सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त सभामा संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा...
हिमालयन हाइड्रोपावरद्वारा वार्षिक साधारण सभा आह्वान
काठमाण्डौ । हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । कम्पनीको वैशाख २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी जेठ १८ गते बुधबारका दिन पोखरामा रहेको होटल पोखरा ग्राण्डमा दिउँसो १ बजे सभा अयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सभामा कम्पनीको नियमावली संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सभामा आर्थिक वर्ष...
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, अध्यक्षमा शुलभ अग्रवाल चयन
काठमाण्डौ। युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक साधारणसभाले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नुका साथै नयाँ सञ्चालक चयन गरेको छ। सभाले कम्पनीको संस्थापक समूहतर्फ शुलभ अग्रवाल, सन्दीपकुमार अग्रवाल, जीवनकुमार अग्रवाल र सीमा गोल्छा तथा सर्वसाधारण समूहतर्फ सीताराम...
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभा आज,यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा आज(वैशाख २३ गते)आयोजना हुँदैछ । कम्पनीको गत चैत २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार कम्पनीको चौथो वार्षिक साधारण सभा रुपन्देही भैरहवामा रहेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा आयोजना हुन लागेको हो। सभामा युनियन लाइफ र अन्य जीवन बीमा कम्पनी एक आपसमा मर्ज हुने...
युनियन हाइड्रोपावरको विशेष साधारण सभा आज
काठमाण्डौ । युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडको विशेष साधारण सभा आज(वैशाख २३ गते)आयोजना हुँदैछ । कम्पनीको वैशाख ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त विशेष साधारण सभा आज काठमाण्डौ ललितपुर धोबिघाटमा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बिहान ११ बजे सभा आयोजना हुन लागेको हो । उक्त सभामा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा(क)र (ख)मा संशोधन...
युनाइटेड इदी मर्दीद्वारा वार्षिक साधारण सभा आह्वान
काठमाण्डौ । युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । कम्पनीको वैशाख १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी जेठ १४ गते शनिबारका दिन पोखरामा रहेको आभ्या क्लबमा बिहान ११ बजे सभा अयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी...
आइएमई लाइफको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न,आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित
काठमाण्डौ । आईपीओ जारी गर्ने अजेन्डा अनुमोदन गर्दै आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौमा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा रामहरि अर्यालको सभापतित्वमा सभा सम्पन्न भएको हो। सभाले कम्पनीमा सर्वसाधारणलाई छुट्टाइएको सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै साथै अन्य कुनै...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, लाभांस वितरणको प्रस्ताव पारित
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीसौँ वार्षिक साधारणसभा आज वैशाख ११ गते सम्पन्न भएको छ। पर्साको वीरगन्जस्थित दियालो लर्डस प्लाजामा सम्पन्न सभाले सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष श्री विशाल अग्रवालद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिले...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न,लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योेरेन्स लिमिटेडको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको लैनचौरस्थित लैनचौर बैङ्क्वेट्समा सम्पन्न सभाले सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न भनी प्रस्ताव गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम रहेको चुक्तापूँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०।३७ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ७.३७...
सगरमाथा इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारण सभा आह्वान,बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको गत वैशाख ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २५ औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको हो । बैठकले आगामी वैशाख २८ गते बुधबारका दिन काठमाण्डौ लैनचौरमा रहेको लैनचौर बैङक्वेटमा बिहान १०ः३० बजे सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सभामा...
नेपाल फाइनान्सको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न,५ सञ्चालक निर्वाचित
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको २९ औँ वार्षिक साधारण सभा(चैत ३ गते)शनिबारका दिन काठमाण्डौमा रहेको होटल एल्लो प्यागोडामा बिहान ११ बजे आयोजना भएको हो । उक्त सभामा संस्थाले अन्य कुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्नेरगाभिने तथा एक्विजिशन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन सञ्चालक समितिलाई...
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारण सभा आह्वान,यस्ता छन् मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ। कम्पनीको चैत २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको चौथो वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो। बैठकले आगामी वैशाख २३ गते शुक्रबारका दिन रुपन्देही भैरहवामा रहेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभामा युनियन लाइफ र अन्य जीवन...
जीवन विकास लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, बम्पर लाभांश अनुमोदन
काठमाण्डौ । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तेस्रो वार्षिक साधारणसभाबाट बम्पर लाभांश पारित भएको छ। गत चैत २५ गते सम्म वार्षिक साधारणसभाले संस्थाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको कुल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गरेको हो। जसमा ७० प्रतिशत बोनस सेयर र ३।६८ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) छन्। सभाले बोनस सेयर वितरणपछि...